ပင်တိုင်ကဏ္ဍ | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 806
Cartoon Win Pe – ကာတွန်း ၀င်းဖေ – iPhotographer
ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ လွန်ခဲ့သည့် အနှစ် ၅၀ ခန့်က လူထုသတင်းစာတွင် ထည့်သွင်းဖော်ပြခဲ့သော ကာတွန်းဖြစ်သည်။ http://moemaka.com/index.php?option=com_content&task=view&id=8494&Itemid=121 No tags for this post.
တင်မိုး ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ၁။ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးက မီးလျှံထနေတယ်။ စီအန်အန်၊ ဘီဘီစီ စတဲ့ သတင်းဌာန တီဗွီတွေကို မကြည့်ချင် မြင်ပါလျက်သား မီးတောက်တွေတဖွားဖွား။ တိုင်းပြည်နယ်နိမိတ်လုကြ၊ ပြည်သူလူထုနဲ့ အာဏာရှင်တွေ စစ်ခင်းကြ၊ ရောဂါထူ ငတ်မွတ် စတဲ့ ကပ်ရောဂါတွေနဲ့ နပန်းလုံးရနဲ့ ဒုက္ခတွေ ပင်လယ်ဝေနေပါတော့တယ်။ အဲဒီဒုက္ခအပေါင်းတွေထဲမှာ မဖြစ်သင့် မဖြစ်ထိုက်ပါဘဲနဲ့ ဖြစ်ရတဲ့ဒုက္ခကတော့ ဘာသာရေးအယူသည်းမှုကြောင့် အစွန်းတဖက်ရောက်ပြီး အကြမ်းဖက်ဝါဒတွေ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းပါပဲ။ ဘယ်နေရာ၊ ဘယ်စခန်းမှာ အသေခံဗုံးခွဲသမားတွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ အသက်ပေါင်းဘယ်လောက်သေကြမလဲ။ ကမ္ဘာကြီးဟာ ရင်တမမ။ ဘာသာတရားကို လွတ်လပ်စွာကိုးကွယ်ခွင့် ပေးထားတဲ့အတွက် ကိုယ့်ဘုရား၊ သူ့ဘုရား အငြင်းပွားစရာ မလိုပါဘူး။ ကိုးကွယ်မှုနဲ့ ပတ်သက်ရင်လဲ အငြင်းမပွားကောင်းပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားတိုင်းဟာ...
ကာတွန်းစောငို – လွှတ်တော်မှာ ဖွတ်ရှော်တွေ အလိုမရှိ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
မိုးမခ မိတ်ဆွေ (မန္တလေး) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ မဟာနာယကချုပ်ဆရာတော် ဘဒ္ဒန္တရာဇဓမ္မာဘိဝံသ မထေရ်မြတ်ကြီးထံ သြဝါဒခံယူပွဲကို ယနေ့ ၂၆-၇-၂၀၁၂ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ တစ်နာရီ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ဓမ္မမဟိဒ္ဓိ လေးထပ်ကျောင်းတော်ကြီး၌ ကျင်းပရာ တပည့်ဟောင်း (ကျောင်းသားဟောင်း) နှစ်ထောင်ခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တပည့်ဟောင်း (ကျောင်းသားဟောင်း)များနှင့်အတူ ဘဒ္ဒန္တဝါသေဋ္ဌာဘိဝံသ အမှူးပြုသော မစိုးရိမ် တိုက်သစ် လက်ရှိ နာယကဆရာတော်များလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ No tags for this post.
အပ်ကြောင်းထပ်နေတဲ့ … ကိစ္စ (Kama Pale)
ကမာပုလဲ ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဆာလောင်ငတ်မွတ်မှုတွေနဲ့ ရိုးသားစွာ နိုးထလာတဲ့ ပန်းပွင့်ကလေး အမေ့ နို့ပိန်ပိန်ကို ရှာလို့ မတွေ့တဲ့အခါ …။ ညက ဟင်းစား ရှာရင်း ပိုးထိသွားတဲ့လူနာ … ။ No tags for this post.
လူငယ်တွေကိုယုံပါ ကျော်သူ (နာရေးကူညီမှုအသင်း – ရန်ကုန်) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ ဂျာနယ်လစ်ဆိုတာ လူမှုအသိုက်အဝန်း၏ ဘယ်ကဏ္ဍမှာမဆို အရေးကြီးသောအလုပ်ကို ဆောင်ရွက်နေသူ တစ်ယောက်အဖြစ် ပါဝင်နေပါတယ်။ ဂျာနယ်လစ်အများစုသည် လူအများလိုအပ်တယ်လို့ ယူဆရတဲ့ သတင်း အချက်အလက်များကို ပေးကြသည်။ လူအများသိလိုသည့် သိထိုက်သည့် သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာရဲ့ အကြောင်းတွေကို လူထုရှေ့မှောက်ရောက်အောင် ဆောင်ကျဉ်းပေးကြသည်။ ၎င်းသတင်းအချက်အလက်များမှ ပြည်သူတွေဟာ မိမိတို့ဘဝမှာ ဘာတွေလုပ်ချင်လဲဆိုတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ကြသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ အချို့သတင်းအချက်အလက်တွေဟာ လူတွေရဲ့ သေရေးရှင်ရေးနှင့် ပတ်သက်နေသည်များကို တွေ့ရပါသည်။ ထို့ကြောင့် နာရေး ကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်သူမှ အရေးကြီးသော (Journalism) ကဏ္ဍတစ်ရပ်အား လူငယ်များအတွက် သင်တန်းတစ်ရပ် ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့သည်။ No tags for this post.
ကျောင်းသားဟောင်းများ တွေ့ဆုံပွဲ အောင်မြင်စွာ ပြီးစီး မိုးမခ မိတ်ဆွေ (မန္တလေး) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၂ မန္တလေးမြို့ မစိုးရိမ်တိုက်သစ်၊ ဓမ္မစေတိယကျောင်းဆောင်သစ်ကြီးနှင့် လောကနာထစေတီတော် ထီးတော်တင်ပွဲ အခမ်းအနားသို့ ကြွရောက်လာကြသော မြန်မာပြည်တစ်ဝှမ်းလုံးမှ မစိုးရိမ်တိုက်သစ် ကျောင်းသား (အသင်းသား) ဟောင်းများသည် ယနေ့ ၂၅- ၇- ၂၀၁၂ ရက်နေ့ ည ၇း၃၀ နာရီတွင် ဓမ္မမဟိဒ္ဓိလေးထပ်ကျောင်းဆောင်ကြီး၌ ကျင်းပခဲ့ကြပါသည်။ No tags for this post.
ကာတွန်း စောငို – ဒါတွေကို နောက်ပြန်မလှည့်ဘူးနော်
ဇူလိုင် ၂၇၊ ၂၀၁၂ No tags for this post.
ဟိုချီမင်းမြို့သို့ အလည်တခေါက် အလည်ရောက်တယ် ဇော်အောင် (မုံရွာ) ဇူလိုင် ၂၆၊ ၂၀၁၂ ဟိုချီမင်းမြို့က ပြင်သစ်စတိုင် ကော်ဖီခါးခါးတခွက် နေ့ခင်း ထမင်းစားချိန်၊ ထမင်းစားပြီးနောက် ဗီယက်နမ်၊ ဟိုချီမင်းမြို့က ကော်ဖီဆိုင်တခုကို နာရီဝက်ခန့် သွားရောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးတွေနဲ့ သွားကြပါတယ်။ ဆိုင်က သိပ်မကြီးပေမယ့် ဓနိမိုးထားတဲ့ဆိုင်လေးမှာ ၁၀ ပေပတ်လည် အခန်းလေးတွေမှာ လွှဲလို့ရတဲ့ လူကြီးစီး ပုခက်လေးတွေ ၄ ခု တပ်ဆင်ထားပါတယ်။ လူ ၄ ယောက်သွားပြီး တယောက် ပုခက်တခုစီ နေရာယူပါတယ်။ ဧည့်ကြိုမိန်းမငယ်တဦးနဲ့ ဗီယက်နမ်လူငယ်၂ ဦးတို့ ဗီယက်နမ်စကားနဲ့ အုန်းရည် မှာသောက်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်လူမျိုးနဲ့ ဗမာလူမျိုး ၂ ယောက်ကတော့ ဗီယက်နမ်စကားလည်း မတတ်၊ သူတို့မှာတဲ့ အုန်းသီးနဲ့...
Page 806 of 832«1...804805806807808...832»
ကာတွန်း ဝင်းအောင် ● သော့ ...
နေသန် ● အစိမ်းရောင်နယ်မြေက ယုန်ကလေး (ဘာသာပြန်) https://t.co/P49T51R12L https://t.co/MojwQsiAFp about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
ညိုရင့်နွယ် (ရေဦး) ● အထီးကျန်မိုးသားတွေ တလူလူလွင့်လို့ https://t.co/cV0l72shyc https://t.co/xxPpQK3Iwr about 16 hours ago ReplyRetweetFavorite
ကာတွန်း နရဏီရဲ့ ဆုတောင်း … https://t.co/Uo4vOHQZUk https://t.co/wu692qcHhA about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite
မောင်ကျေးရေ – မြေအောက်ရေဥပဒေ ပြုစုရာတွင် https://t.co/BTHkRYroH9 https://t.co/wFtVWAFDK3 about 17 hours ago ReplyRetweetFavorite